Ihe niile I kwesiri ịma gbasara akụkọ Instagram | Martech Zone
Instagram nwere Ndị ọrụ 250 nde kwa ụbọchị na ọ nwere ịrịba nwere ike maka azụmahịa gị, karịsịa mgbe gị na ụlọ ọrụ adopts na Akụkọ banyere Instagram atụmatụ. Ị maara 20% nke ulo oru -enweta kpọmkwem ozi n'ihi nke Akụkọ? n'ezie, 33% nke akụkọ niile ewu ewu na-ebugo site na azụmaahịa!
Kedu ihe bụ Akụkọ gbasara Instagram?
Akụkọ Instagram nyere ndị azụmaahịa ohere ịkekọrịta ihe ọhụụ akụkọ nke ụbọchị ha, nke nwere ọtụtụ onyonyo na vidiyo.
Eziokwu gbasara Akụkọ gbasara Instagram
Ogologo oge ole ka Akụkọ gbasara Instagram? 15 sekọnd ọ bụla.
Ogologo oge ole ka akụkọ gbasara Instagram ga-apụ? A na-ahụ ha maka naanị 24 awa.
Akụkọ Instagram bụ ọha? Ha na eso usoro ikikere ịtọbe maka profaịlụ gị.
Kedu ụdị vidiyo enwere ike ibugo maka Akụkọ gbasara Instagram? MP4 format na H.264 Codec & AAC ọdịyo, 3,500 kbps video bitrate, a 30fps etiti ọnụego ma ọ bụ n'okpuru, 1080px dum, na a kacha filesize ịgba nke 15mb.
Nwere ike iji njikọta nke onyonyo, vidiyo, na boomerangs na Akụkọ nke Instagram gị.
Igodo nke Instagram Akụkọ Ọganiihu
Ihe omuma ihe omuma site na Isi Obodo Isi na-ejegharị gị site na ọ bụghị naanị ịkọ akụkọ, mana gafee iwulite atụmatụ Instagram. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịga nke ọma:
Mee atụmatụ ihe na-ejikọ ọnụ atụmatụ iji nweta akụ niile ịchọrọ iji mepụta akụkọ ịchọrọ.
Họrọ a oge ebe ndi n'eso gi no.
Mee ihe mmetụta na mbụ 4 sekọnd ka onye na-ekiri gị na-anọ maka akụkọ ndị ọzọ.
Gbaa akụkọ gị vetikal - otú ndị na-ege gị ntị ga-esi na-ele ya.
Iji geotagging iji nweta 79% itinye aka na mpaghara ezubere iche.
Mepụta mfe aro n'ihi na ndị na-ekiri ka swipe na-eso gị na ebe nrụọrụ weebụ.
Gụnyere lekwasịrị anya havehtags ya mere akụkọ gị ji tinye na Mpịakọta Akụkọ.
Jiri ngwa dị ka Torykpụ iberibe akụkọ gị n’usoro.
Mechaa akụkọ gị akpọ-na-eme ịgba ume itinye aka.
Chee echiche banyere inweta mpụga influencer iji weghara akụkọ gị, nke a na - eme ka aka gị nwee ihe ruru 20%!
Jiri ụdị akụkọ na-adịghị mma iji wulite mmekọrịta ma nye a n'azụ Mpaghara lee azụmahịa gị anya.
Nye ndị na-ekiri akụkọ pụrụ iche na-enye yabụ ị nwere ike soro ha ma kwụghachi ha ụgwọ maka iguzosi ike n'ihe ha.
Jiri Akụkọ ịkwanye a nyocha gaa na ndị na-ege gị ntị na-eji mpempe akwụkwọ ntuli aka. Mee ka ọ dị mkpụmkpụ ma dịkwa ụtọ, naanị mkpụrụedemede 27!
Akụkọ Instagram etolitela kemgbe ọ malitere na August 2016, na ịchọpụta otu ị ga-esi mee ya nke ukwuu ga-abụ nnukwu uru na mbọ ị na-agba maka mgbasa ozi mgbasa ozi. Kedu ihe ị na-eche? Bido kọọrọ akụkọ gị ugbu a. Nivine si Isi Ibu Isi Obodo
Nke a bụ nnukwu infographic, Obere ntuziaka azụmaahịa na Akụkọ gbasara Instagram:
Tags: instagraminstagram akụkọVidio Ahịaakụkọ